जिब्रोको अवस्थाले थाहा हुन्छ तपाईमा भएको रो*ग – Khabaarpati
जिब्रोको अवस्थाले थाहा हुन्छ तपाईमा भएको रो*ग
October 10, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on जिब्रोको अवस्थाले थाहा हुन्छ तपाईमा भएको रो*ग
तपाई स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल पुग्नुभयो भने डाक्टरले पहिला मुख खोल्न लगाउँछन् र जिब्रो बाहिर निकान्नुस् भन्छन् । तपाईले जिब्रो निकालेपछि डाक्टरले तपाईको जिब्रोको अवस्था हेर्छन् । पेट , टाउको दुखेर होस् वा ज्वरो आउँदा तपाईको स्वास्थ्यजाँचको शुरुवात प्रया जिब्रो हेरेरै हुन्छ । अन्य समस्या लिएर अस्पताल जाँदा डाक्टरले किन जिब्रोको अवस्था हेर्छन् ?
स्वास्थ्य व्यक्तिको जिब्रो गुलाबी रंगको सफा र पातलो हुन्छ । जिब्रोले शब्दको उच्चारण र खानेकुराको स्वाद छुट्याउन मात्र नभइ मानिसलाई लाग्ने रोगको संकेत गर्ने काम पनि गर्छ । मानिसमा लाग्ने विभिन्न किसिमका रोगको लक्षण जिब्रोमा पनि देखिन्छ । त्यसैले डाक्टरहरुले जिब्रोको अवस्था हेरेर मानिसमा लागेको रोगको सजिलै पत्ता लगाउन सक्छन् ।
मानिसमा लाग्ने रोग अनुसार जिब्रोमा पनि परिवर्तनत हरु आउँछन् । जिब्रोका अवस्था हेरेर ज्वरो, खोकी, जन्डिस, रक्तअल्पता, टाउको तथा पेट सम्बन्धी समस्या भएको थाहा पाउँन सकिन्छ ।
कस्तो जिब्रो कुन रोगको संकेत
– जिब्रो पहेँलो हुने, जिब्रोको किनारामा दाँतका निशानहरु देखिनु शरीरमा रगतको कमी भएको संकेत हो । – जिब्रोमा कालो दाग देखिन्छ भने त्यो ऊच्च रक्तचापको समस्या भएको संकेत हो । –हार्टअट्याक हुनसक्ने व्यक्तिको जिब्रोको अघिल्लो भाग सुकेको हुन्छ । –जिब्रो पहेँलो र चिल्लो जिब्रोले रगत सम्बन्धी समस्या हुन् ।
–जिब्रो निलो भएमा मुटुसम्बन्धी समस्या हुनसक्छ । –जिब्रोमा चिनीका मसिना कण जस्तो थोप्ला थोप्ला देखिन्छ भने पेटमा जुका परेको हुनसक्छ । –जिब्रो अत्याधिक रातो, सेतो वा कालो छ भने मुखमा किटाणुको संक्रणम भएको हुनसक्छ । –जिब्रोको सतहमा चिरा परेको छ वा लामा र गहिरा धर्साहरु देखिन्छ भने भिरंगी भएको हुनसक्छ । –जिब्रोमा घाउ भइरहने समस्या छ भने पेटसम्बन्धि जटिल रोगको लक्षण हुनसक्छ । –जिब्रोले राम्रोसँग स्वाद थाहा पाउँदैन भने भिटामिन बी १२ को कमी हुनसक्छ ।
५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्ने ग्राहकलाई सून्य प्रतिशत व्याजदरमा बजाज बाइक . . .
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ..
समयमै सुतौँ, निन्द्रा नपुग्दा यस्ता समस्या आउँछन्
October 2, 2020 goodmam
कपाल कालो बनाउन चाहनुहुन्छ ? यी ८ घरेलु उपाय मध्ये कुनै एक उपाय अपनाउनुहोस्
October 5, 2020 goodmam
यसरी निरन्तर आलुको सेवन गर्नाले नियन्त्रणमा आउँछ तपाईको तौल, हुनुपर्ने छैन चिन्तित
October 28, 2020 goodmam
दुई प्रेमिकासँग एउटै मण्डपमा बिहे ! June 12, 2021
प्युठामा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको जिप दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु June 12, 2021
नायीका विपनालाई थापा बारीका फर्सिको मुन्टा र फर्सीको सोख (भिडियो सहित) June 12, 2021
आँफू र साथीमाथि मध्यरातमा आक्र`मण भएपछि डाँको छाडेर रोए ज्ञानेन्द्र शाही (भिडियो सहित) June 12, 2021
४ वर्षअघि रेकर्ड गरिएको निशा घिमिरेको अन्त’रबार्ता यस्तो रहेछ (भिडियो सहित) June 12, 2021